Henrikh Mkhitaryan Oo Cadeeyay In Mkhitaryan Uu Kooxdiisa Dortmund U Sheegay In Uu Man United Ku Biirayo Iyo Mourinho Oo Wenger Ku Garaacaya Saxiixa Mkhitaryan | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Maxaa Cusub » Henrikh Mkhitaryan Oo Cadeeyay In Mkhitaryan Uu Kooxdiisa Dortmund U Sheegay In Uu Man United Ku Biirayo Iyo Mourinho Oo Wenger Ku Garaacaya Saxiixa Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan Oo Cadeeyay In Mkhitaryan Uu Kooxdiisa Dortmund U Sheegay In Uu Man United Ku Biirayo Iyo Mourinho Oo Wenger Ku Garaacaya Saxiixa Mkhitaryan
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 15-06-16 1:00 PM War badan ayaa maanta ka soo baxay sheekadii suuqa kala iibisaga ee xidiga Borussia Dortmund ee Henrikh Mkhitaryan, wuxuuna wakiilka xidigani ee Mino Raiola uu cadeeyay in Mkhitaryan uu kooxdiisa Dortmund u sheegay in uu kooxda uga baxayo sidii uu Man United ugu biiri lahaa.
Dhinac kale madaxa fulinta kooxda Borussia Dortmund ee Hans-Joachim Watzke ayaa cadeeyay in ayna kooxdiisu ogolaan doonin in Henrikh Mkhitaryan uu kooxda ka tago ilaa inta uu heshiisku dhacayo. Heshiiska Henrikh Mkhitaryan ee Dortmund ayaa dhacaya sanadka 2017, sidaa daraadeed Dortmund ayaa xaqiijisay in ayna Mkhitaryan u ogolaan doonin inuu xagaagan kooxda ka tago, taaso keeni karta in sanadka 2017 uu si xor ah kooxda kaga tagi doono.
Wakiilka Heshiiska Henrikh ee Mino Raiola ayaa yidhi: “Manchester United waa fursad khaas ah, Mkhitaryan waxa uu doonayaa inuu halkaas tago”. Sidoo kale BBC Sport ayaa sheegtay in Henrikh Mkhitaryan uu kooxdiisa u sheegay in uu ku biirayo Manchester United, wuxuuna warkini ka nixinayaa Arsene Wenger oo bartilmaameedka koowaad ka dhiganayay 27 jirkan ree Armenia.
Arsene Wenger ayaa Henrikh Mkhitaryan doonayay 18 kii bilood ee ugu danbeeyay, balse waxay hadda u muuqataa in Jose Mourinho uu fursad fiican u haysto la soo wareegista xidigan oo xili ciyaareedkii dhamaaday qaab ciyaareed cajiib ah ku soo badhigay kooxda Dortmund. Dortmund ayaa haddii ay Henrikh Mkhitaryan ka hor joogsado xagaagan in uu kooxdeedaka baxo waayi doonta 24 ka milyan ee xidigan lagu qiimaynayo.
Madaxa fulinta kooxda Borussia Dortmund ee Hans-Joachim Watzke ayaa isaga oo cadaynaya in ayna kooxdiisu iska iibin doonin Henrikh Mkhitaryan sidoo kale xaqiijiyay in 27 jirkani uu si cad udiiday in uu wax heshiis ah u kordhiyo Dortmund wuxuuna yidhi: “Waxaanu Henrikh Mkhitaryan afartii bilood ee ugu danbaysay kala xaajoonaynay heshiis cusub, hadda waxaanu ognahay in aanu heshiis kordhin samayn doonin. Marnaba may jirin balan ah inuu anaga naga bixikaro xili hore”. sidan ayuu u sheegay Bild. Borussia Dortmund oo dhawaan wayday difaaceedii Mats Hummels oo Bayern Munich ku biiray ayaa sidoo kale la dhibtoonaysa in ay kooxaha waa wayn ee Yurub ka ceshato xidigaha kooxdeeda ugu muhiimsan oo uu ku jiro gool dhalyaha Pierre-Emerick Aubameyang kaas oo ay kooxo badani doonayaa